I-Stymied by Waits to Funa I-Asylum ngokusemthethweni, abanye abafuduki bawela ngokungekho mthethweni, iNgxelo kaRhulumente entsha iFumana - Ihlabathi
I-Stymied by Waits to Funa I-Asylum ngokusemthethweni, abanye abafuduki bawela ngokungekho mthethweni, iNgxelo kaRhulumente entsha iFumana
Umntu ohamba ngeenyawo kwiBhulorho yaMazwe ngaMazwe yaseMatamoros udlula uJennifer, oneminyaka emi-2, osuka eGuatemala, efuna indawo yokukhosela eUnited States nomama wakhe.
Isoftware yoyilo lwasekhaya eyi-3d
Ukungakwazi kwabasemagunyeni abangeneleli ukuphatha inani labantu abafuna indawo yokukhosela ngokusemthethweni kumazibuko okungena kumda wase-US kunokunyanzela abaninzi ukuba bawele elizweni ngokungekho mthethweni, ngokutsho ingxelo karhulumente ikhululwe ngoLwesibini.
Ingxelo, ekhutshwe ngumhloli jikelele weSebe lezoKhuseleko lweLizwe, iphonononge ukuba kutheni umgaqo-nkqubo wonyamezelo wolawulo lukaTrump udale loo siphithiphithi ecaleni komda kwintwasahlobo edlulileyo. Ingxelo ifikelele kwizigqibo ezininzi ezifanayo ukuba iindaba sele zikhankanyiwe: I-DHS icwangcise kakubi ngenxa yempembelelo yomgaqo-nkqubo kubaphambukeli nabantwana abancinci, yayingenayo inkqubo yokugcina umkhondo wento ebizwa ngokuba ngabantwana bangaphambi kwamazwi abo bahlulwe. abazali babo, kwaye akukho ndlela isebenzayo yokulandela abantwana abanikezelwe kugcino lweSebe lezeMpilo kunye neeNkonzo zoLuntu. Ubuncinci abantwana abayi-136 abohlukene nabazali babo phambi kokuba uMongameli uDonald Trump aphelise lo mkhuba ngoJuni abakadityaniswa nosapho, ngokwamaxwebhu enkundla.
Kodwa ukufumanisa kwayo ukuba i-DHS ibe negalelo ekungeneni ngokungekho mthethweni ngokujikisa uninzi lwabantu ababezama ukufaka isicelo ngokusemthethweni kwizibuko lokungena kufana nesikhalazo ekudala sikhona sabameli bomfuduko esingazange silungiswe ngumyalelo kaTrump wokuphela kwe-20 kaJuni. ukwahlukana.
Ingxelo yafumanisa ukuba umkhuba wokulawula ukuba bangaphi abantu abanokungena e-US ukuba bafune indawo yokukhosela - eyaziwa ngokuba yimitha - mhlawumbi iqhube abafuduki abafuna ukhuseleko ukuba bathathe indlela eyingozi yokuwela ngokungekho mthethweni.
Nangona i-DHS igxininisa ukuba uMgaqo-nkqubo wokuNyamezelwa kweZero kunye nokubalwa kweemitha kumazibuko okungena kuyimiba eyahlukileyo, igosa le-CBP linike ingxelo yokuba ukusilela okubangelwe yile miyalelo ikhuphisanayo kusenokwenzeka ukuba kubangele ukongezwa kwemida ngokungekho mthethweni, yatsho ingxelo. Inyani yokuba bobabini abaphambukeli kunye neBorder Patrol banike ingxelo yokuba ukulinganisa ukulinganisa kukhokelela ekwenyukeni kwemida okungekho mthethweni kubonisa ngamandla ubudlelwane phakathi kwezi zibini.
Abameli kudala benza ingxabano efanayo malunga nokulinganisa imitha, umkhuba othi ingxelo ubuhlala kumda osemazantsi ukususela ngo-2016 ubuncinane.
Ukuthintela ukufikelela kunye nokunciphisa ukufikelela kwi-port yokungena kukukhanyela okwakhiweyo okunyanzela abantu ukuba bangene e-US ngeendlela ezingaqhelekanga. Ndiyibonile loo nto idlala ngokuphindaphindiweyo, uNicole Ramos, umlawuli osekwe eTijuana weprojekthi yamalungelo omda we-Al Otro Lado kwaye ogxile kubabaleki abafuna indawo yokukhosela e-US, uxelele Iindaba zeBuzzFeed. Ndiyazi iingxoxo [zikarhulumente], abaceli abantu ukuba balinde ixesha elingenammiselo, bacela abantu ukuba balinde, kodwa ngeliphi ixesha apho ukulinda kuba kukukhanyela okwenyani kwaye lingakanani ixesha lokulinda lithathwa njengelamkelekileyo xa abantu basengozini ekhawulezileyo?
Ukufaka isicelo sendawo yokukhosela kwizibuko lokungena yindlela ekudala isekiwe yabaphambukeli abafuna ukukhuselwa kwiimeko zamazwe abo ukuze bangene eUnited States ngokusemthethweni. Ngexesha lokuphakama kwengxaki yokwahlukana kosapho, xa umgaqo-nkqubo wonyamezelo wolawulo lukaTrump ufuna ukuba kutshutshiswe wonke umntu obanjwe engena e-US ngokungekho mthethweni, bobabini uNobhala woKhuseleko lweLizwe uKirstjen Nielsen kunye neGqwetha likaJeff Sessions babongoze abo bafuna indawo yokukhosela ukuba badlule kwizibuko. ukungena ukuze baphephe ukwahlukana nabantwana babo.
Kodwa i-ofisi yomhloli jikelele yafumanisa ukuba iindawo zokufudukela kwelinye ilizwe ezisecaleni komda zazinganelanga ukucinezela abantu abafuna indawo yokukhosela, bekhuthaza abanye ukuba bawele ngokungekho mthethweni.
Ingxelo icaphula imizekelo emininzi: Umphathi weBorder Patrol uxelele iqela lomhloli jikelele ukuba ukungena ngokungekho mthethweni kuyenyuka xa abo bafuna indawo yokukhosela babalwa ngemitha kumazibuko okungena. Abaphambukeli ababini ababanjwe ngamagosa eBorder Patrol baxelele abahloli ukuba bawela umda ngokungekho mthethweni emva kokujikiswa kumazibuko okungena. Owasetyhini uxelele abahloli ukuba ujikiswe izihlandlo ezithathu ezama ukucela indawo yokukhosela ngaphambi kokuba athathe isigqibo sokuthatha ithuba lokuwela e-US ngokungekho mthethweni.
UDavid J. Phillip / AP
Umama osuka eHonduras ubambe umntwana wakhe oneminyaka eli-1 ubudala njengoko benikezela kwi-US Border Patrol agents emva kokuwela umda ngokungekho mthethweni.
Iingcamango ezilula zethanga
Le ngxelo ichaze inkqubo apho amagosa eBorder Patrol amisa koonomathotholo bemida yezizwe ngezizwe ngaphambili ukukhangela ukuba umntu ofuna indawo yokubhacele unokuqwalaselwa kusini na. Xa isango lixinene kakhulu, lowo ufuna indawo yokukhosela uyaxelelwa ukuba abuye kamva.
Nangona iqela le-OIG lingazange libone ukuxinana okukhulu kumazibuko e
Ekungeneni kwayo, iqela liye laqaphela ukuba indawo ebekelwe ukubamba
Abafuna indawo yokukhosela ngexesha lokulungiswa banqongophele, yatsho ingxelo. Eso sithuba sincinane sathintelwa ngakumbi yimigaqo emisela ukuba ngabaphi abo bafuna indawo yokusabela abanokuvalelwa kwigumbi elinye. Ngokomzekelo, amadoda angatshatanga agcinwa ngokwahlukileyo koomama abanabantwana.
Ngokuxhomekeke ekubeni ngubani obanjwe ngosuku olunikiweyo kunye nokucwangciswa kwamagumbi okubamba, isibonelelo sinokufikelela kumthamo ngokukhawuleza, utshilo ingxelo. Kwelinye izibuko lokungena iqela le-OIG elatyelelayo, abasebenzi be-CBP bazama ukwandisa amandla abo ngokuguqula ii-ofisi zangaphambili zibe ngamagumbi okubambela ethutyana.
Ingxelo ayizange inike iingcebiso malunga nendlela yokusombulula loo ngxaki - nangona abameli bexesha elide beqaphela ukuba akuqhelekanga kumachweba okungena kwabaphambukeli abavela kwihlabathi lonke ukuba balinde iintsuku okanye nangaphezulu ithuba labo lokucela indawo yokukhosela.
Kwisiteyitimenti, uKatie Waldman, isithethi seDHS, akazange aphendule kwisigqibo somhloli jikelele sokuba izibonelelo ezingonelanga zokusetyenzwa kwabafaki-zicelo beendawo zokukhuselwa zibe negalelo ekufudukeni ngokungekho mthethweni phakathi kwamazibuko okungena. Uthembise ukuba iDHS iya kuqhubeka nokutshutshisa abaphambukeli ababanjwe bengena eUnited States phakathi kwamazibuko okungena.
I-CBP inakho kwaye iya kuqhubeka iyamkela kwaye iqhube amabango oloyiko oluthembekileyo kumazibuko okungena ngaphezu kokukhusela ukhuseleko nokhuseleko lwabahlali baseMerika kubadlali abakhohlakeleyo kunye neziyobisi, uWaldman uthe kwingxelo. Olu lawulo alusayi kuphinda lukubethe ngoyaba ukufudukela kwelinye ilizwe ngokungekho mthethweni kwaye luza kuqhubeka nokuthumela abanqumla imida ngokungekho mthethweni ukuba babatshutshise.
Kwimpendulo yalo kwingxelo, iSebe lezoKhuseleko lweLizwe lathi ukulinganisa ngemitha kwabo bafuna indawo yokukhosela akuzange kubangele ukutshutshiswa okusekelwe kukunyamezelana okanye ukwahlulwa kweentsapho kumazibuko okungena. Le arhente ikwathi ukwenza abantu abafuna indawo yokukhosela balinde kwezinye iimeko kungenxa yezizathu zempilo kunye nokulungelelanisa izixhobo.
Umgaqo-nkqubo we-CBP awufuni ukuba umntu aphume emgceni kwaye uyawathintela amagosa ukuba afune abantu ukuba bahambe okanye bajike abantu abafuna ukwamkelwa, yatsho impendulo ye-DHS.
Abameli, nangona kunjalo, bathi ukungonelanga kwezixhobo zase-US ukwamkela inani labantu abafuna ukufaka isicelo se-asylum kwandisa isiphithiphithi emngceleni.
iphepha lodonga lweendonga zasekhitshini
URamos uthe ubone abantu belinda iiveki ezisixhenxe ukuya kwezisibhozo ukuze bafumane ithuba lokucela indawo yokukhosela. Ngamanye amaxesha abathengi bakhe basengozini ekhawulezileyo, utshilo, ekhumbula imeko yowasetyhini ogqithise isini owaphantse waxhwilwa wanyanzelwa ekurhwebeni ngesondo. Wasinda kwaye wakwazi ukuya kumapolisa aseTijuana, awamxelela ukuba kufuneka asishiye isixeko ngokukhawuleza kuba umntu awayebaleka kuye wayenamandla kakhulu kwaye kwakungekho gunya lingako linokumnceda. Eli bhinqa laphela liwela e-US ngokungekho mthethweni ngenxa yoko.
Omnye umfazi owajikiswa kwizibuko lokungena eCarlifonia kwiiveki nje ezimbalwa wathinjwa kunye nonyana wakhe omncinci ngamaqela emigulukudu yeziyobisi, utshilo uRamos. Ebudeni beentsuku eziliqela awayevalelwe, wadlwengulwa ngokuphindaphindiweyo waza wanyanzelwa ukuba abukele ukubulawa kwabanye abaphambukeli. Ekugqibeleni intsapho yelo bhinqa yahlawula intlawulelo eyaneleyo, ixabiso lemoto, ukuze limkhulule. Kodwa wathi akufika kwizibuko laseArizona, esopha, egqunywe luthuli yaye elila, wajikiswa. Ekugqibeleni wakwazi ukuwela kwizibuko lokungena ngoncedo lwe-Al Otro Lado.
Xa ujikisa abantu abaphelelwe lithemba, bangena ngeendlela ezingaqhelekanga ezivumela urhulumente ukuba abatshutshise ngokusemthethweni ngokungena ngokungekho mthethweni kwaye basebenzise umtshutshisi ukubamba abantwana babo, utshilo uRamos. Kwaye basebenzisa amehlo abantu abangena ngokungekho mthethweni bathi 'Bakhukula umda, sifuna udonga.' Badala ingxaki kwaye basebenzisa le ngxaki ukuthethelela intetho echasene nabantu abenza konke okusemandleni abo ukulandela umthetho. .
Abanye abantu abafuna indawo yokhuseleko kufuneka yila ukuze ufumane ithuba lokucela indawo yokufihla intloko kumagosa ase-US. Elinye ibhinqa lenza ngathi lihlamba iifestile zemoto de libe kufutshane ngokwaneleyo e-US ukuze licele indawo yokukhosela. Omnye wakhwela ibhasi eya e-US, emva koko wacela indawo yokukhosela xa ummeli womda wacela amaxwebhu akhe.
URamos uthe iUnited States ineendlela zokujongana nokuthontelana kwabantu abafuna indawo yokukhosela emdeni.
Ungurhulumente womanyano waseMelika, ngokungathandabuzekiyo ulelinye lawona mazwe atyebileyo emhlabeni, utshilo. Yibonakalise ngendlela engabavimbi abantu amalungelo abo oluntu kwaye ibeke abantu emngciphekweni.
Ingxelo yomhloli jikelele ikwafumanise ukuba ngexesha lengxaki kwintwasahlobo edlulileyo urhulumente ubambe abantwana abasuka kwamanye amazwe ixesha elide kunokuba bekufanele, waxoka ngokuba nesiseko sedatha esisembindini ukunceda ukumanyanisa iintsapho ezahluleleneyo, kwaye wanika ulwazi olubi kubazali abazama ukuphinda bahlangane nabantwana babo.
Iiarhente zeBorder Patrol azikhange zibonakale zithatha amanyathelo okuqinisekisa ukuba abantwana abangakwaziyo ukuthetha kwaye bohlulwe kubazali babo banokuchongwa ngokuchanekileyo. Ii-arhente azizange zibonelele eli qela labantwana ngeentsimbi zesandla okanye ezinye iindlela zokuchonga kwaye abazange bafake iminwe okanye bafote ukuze baqinisekise ukuba banokudibaniswa lula kunye nefayile efanelekileyo, ingxelo yathi.
Amagunya ajongene nokufudukela kwelinye ilizwe asenokuba akwazile ukukuphepha ukwahlula ezinye iintsapho, yaqukumbela ingxelo. EMcAllen, eTexas, umzekelo, abazali abaninzi ababetshutshiswa phantsi komgaqo-nkqubo wokunyamezelwa kweqanda bagwetyelwa ukunikwa ixesha baze babuyiselwe kanye elugcinweni lwe-CBP. Amagosa akwiziko lokusebenzela apho athi ukuba umntu omdala ubuyile enkundleni kwaye umntwana wabo esekhona baya kubahlanganisa.
izikimu zombala wegumbi lokuzolisa
Nakuba kunjalo, amagosa e-CBP aye aba bantu badala basuswa enkundleni basiwa ngqo kugcino lwe-ICE endaweni yokuba bababuyisele esikolweni babadibanise nabantwana babo.
Ngokutsho kwegosa eliphezulu ebelibandakanyeka kwesi sigqibo, i-CBP yenze olu tshintsho ngenjongo yokuphepha ukwenza amaphepha ongezelelweyo afunekayo ukuze abafundi bafundelwe abantu abadala, yatsho ingxelo.
Abafuna i-Asylum kufuneka bafumane ubuchule bokunqoba imiqobo yase-US kumda
I-US ibango ineDatabase yokulandela umkhondo waBantwana abasuka kwamanye amazwe kunye nabazali. Kodwa Akukho Bani Uza Kuthetha Ngayo.
Imidlalo yokubulela usapho
UWilliam sonoma ekhitshini lasekhaya
khanyisa iphuli yokudada
UJonathan scott umfazi wokuqala